Qormo xiiso badan: Sida uu Mohamed Salah uga mid Noqday xiddigaha ugu fiican Kubadda Cagta!
Wednesday, December 19th, 2018 - 05:56:20
Saturday January 27, 2018 - 20:22:45 in Wararka by Hussein Hadafow
Mohamed Salah bandhiggiisa xagaagan, wuxuu kusoo daray laacibka in uu ka mid noqdo xiddigaha ugu wanaagsan Yurub. Laacibka dalka Masar ayaa markii uu dib ugu soo laabtay Premier League sameeyay amakaag, balse Salah ayaan weli aheyn sida laga doonayo in uu noqdo si uu ku hiigsado hoggaamiyeyaasha kubadda cagta.
Laacibkan oo 25-jirkan ayaa waqti kooban ku noqday laacib lagu daabacay World Soccer Joornaalka la yiraahdo, xiddigaha ayaa is beddello sameeya Cairo wargeyska kasoo baxa ee El Mokawloon ayaa maanta aad uga hadlay arrinta laacibkan. Qoraalka ayaa wuxuu yahay mid ka imaanaya ilaa Basel, Salah sida uu ku noqday fursad lumiye, haddase ah dhammeystire Buuxa.
Waxaa uu aad ula shaqeynayay kooxda reer Swiss markii uu joogay gooldhaliye Alexander Frei, in kastoo uu bandhig ahaan aad u caawiyay wiilkan oo da’yar ahaa. "Markii uu imaanayay xariif ayuu ahaa,” Frei ayaa yiri. "ma jirin laacib aan u dhigi karo. Wuxuu ahaa halyeey mid noqon kara sida ugu dhaqsaha badan.
"Sida ugu dhaqsaha badan ayuu uga mid noqday xiddigaha ugu wanaagsan. Maalinba waxbaa uga kordhayay ama tababarka ama ciyaarista. Waxaa jiray Afkaar la is weydaaranayay.
"Lama aanan yaabin marka la ii sheegay in uu noqday laacib aad u heer sarreeya. Oo markii horeba wuxuu u sameysnaa hannaan weerar oo aan caadi aheyn. Waqtigiisii Fiorentina iyo Roma, wax fiican ayuu sameeyay. Waxayna taasi bartay in uu ku biiro Liverpool adigoo helay macallin sida Jurgen Klopp ma lumi doontid.”
Salah macallinkiisii hore ee kooxda Roma, Luciano Spalletti, ayaa sheegay in uu ku fiicanyahay in weerar toos ah la dheelsiiyo: "Waxaan u sheegnay in uusan fiirin la ciyaarista saaxiibadiis kaliya, wuu dhalin karaa. Waxay la macno tahay in uu isaguba dhalin karay.”